Trano hipetrahana : ny tokony atao raha vao hanorina – Trano 3D
Ny trano nofisiko …
Ankoatran’ny vola hanaovana azy dia misy lalàna tsy maintsy arahana ny fanamboarana trano eto Madagasikara. Tsy zavatra kelikely izany ary misy fepetra mila arahana raha te hanana trano tsara endrika sy mateza ary manara-dalàna.
Ahoana hisafidianana ny tany ?
Mazàna moa isika rehefa manapa-kevitra ny hanao fanorenana vaovao dia mijery tany somary misitaka ny renivohitra. Ny mahatsara izay dia afaka migalabona tsara amin’ny fanamboarana saingy tsy manakana ny fanorenana trano an-drenivohitra koa nefa izany raha manana tany. Fa na an-drenivohitra na somary any ambanivohitra no misy anao dia mila hevitra teknisiana foana mahakasika ny tany. Noho izany dia tsara ny miantso géomètre mba handrefa sy hampahalala ny mombamomba ilay tany rehetra alohan’ny hanaovana fanorenana. Ity farany no mampahalala raha azo hananganana trano ilay tany, ary izy no mampahafantatra antsika hoe toy inona ny tokony atao an’ilay tany alohan’ny hampiasana azy. Ampahafantariny ihany koa ny mombamomba ny lalan-drano.
Tsy maintsy atao ve ny plans ?
Mbola maro amintsika no manangana trano tsy misy plans noho ny tahotra ny amin’ny sandan’ny fanaovana izany. Kanefa ireo plans sy 3D ireo dia miantoka ny hamafy sy ny hatsaran’ny tranonao. Izany hoe sady miantoka ny sécurité no miantoka ny confort. Ny Trano 3D dia cabinet d’architecture afaka manome plans d’architecte sy devis ary 3D tsara indrindra ho anao. Izany études izany dia mifanaraka amin’izay izay tena ilainao. Ireo plans ireo dia anisan’ny dossier hakanao permis de construire any amin’ny firaisana izay misy anao.
Inona no atao mandritran’ny chantier ?
Ny fandavahana sy ny fanaovana terrassement
Ny fametrahana ny fototra
Ny fandrarahana ny béton– Ny fananganana ny rindrina
Ny fametrahana ny tafo
Ny fampifandraisana ny rano, jiro sy ny fivoahan’ny rano efa niasa
Ny fametahana ny carreaux
Ny fametahana ny varavarana sy varavarakely
Ary ny finitions isan-karazany
Article précédentNy plans d’architecte
Article suivantNy trano atao 3D
3 réflexions au sujet de “Trano hipetrahana : ny tokony atao raha vao hanorina”
nomenjanahary dit :
zaho eo ampnaovana mihts nefa asa izay raha manao aona …ep @resaka tafo aho zaho
RALAINGO dit :
fa raha any ambanivohitra anie no manao trano de tsy maintsy mila rano e, tsy voresaka mitsy ny momba zany nefa , ny mijery rano no ilaina voalohany indrindra de zay vao afaka manao trano , tsy hety mitsy ny tranonao raha tsy misy rano , na de fotsiny aza hoe anaovana lalotra
Tokony afaka manao lava-drano fotsiny dia voavaha ny olana ka.
Répondre à RALAINGO Annuler la réponse.
Miantsoa anay mivantana ianao na mandefa hafatra raha mila devis ho an’ny plans na 3D-n’ny tranonao: